थाहा खबर: रामवीरलाई कार्यकर्ताको प्रश्न, राजीनामा किन दिएको?
काठमाडौं : दसैंले गर्दा सुनसानप्रायः सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा आउने–जाने क्रम फाट्टफुट्ट मात्र थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र ७ का सांसद रामवीर मानन्धर बिहीबार अपराह्न १ बजेतिर कार्यालय आइपुग्दा माहोल बेग्लै बन्यो।
पार्टीका सांसद र कार्यकर्ताको घेरामा परेका उनीमाथि प्रश्नको ओइरो लाग्यो। ‘पार्टीले टिकट दिएको हो, पार्टीले भनेपछि जसले पनि पद छाड्नुपर्छ’, उनले झर्को मान्दै जवाफ दिए। अधिकांशले ‘पार्टीमा सल्लाह नै नभई कसरी राजीनामा दिनुभयो त? ’ भन्ने प्रश्न तेर्स्याए। उनी यो प्रश्नको जवाफ दिनबाट तर्किंदै थिए। उनी केही बेरमै दलको कार्यालयबाट निस्किए।
उनको निर्वाचन क्षेत्रका नेता÷कार्यकर्ताले यो कदमप्रति जिज्ञासा राख्दै आक्रोश जनाएका छन्। राजीनामा दिने चर्चा सुनेदेखि नै कार्यकर्ताले उनलाई निरन्तर फोन गरिरहेका छन्।